यी ५ कम्पनीकाे एक अर्ब २१ करोडको आईपीओ जारी हुँदै, कसको कति ? – BikashNews
यी ५ कम्पनीकाे एक अर्ब २१ करोडको आईपीओ जारी हुँदै, कसको कति ?
२०७८ माघ ६ गते १७:४१ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाली प्राथमिक बजारमा अब धमाधम एक अर्ब बढीको आईपीओ निष्काशन हुने भएको छ । बजारमा लघुवित्त र हाइड्रो समूहका कम्पनीहरुले कूल १ अर्ब २१ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने भएका हुन् ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी हाइड्रो कम्पनीहरुको रहेको छ । हाइड्रो समूह अन्तर्गतका कम्पनीले ९९ करोड ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने भएका हुन् भने लघुवित्त समूह अन्तर्गतका संस्थाले २२ करोड ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएसँगै हाइड्रो समूहका दुई र लघुवित्त समूहका तीन कम्पनी गरी ५ वटा कम्पनीलाई सेयर निष्काशन गर्न बाटो खुला भएको हो । यससँगै यिनीहरूले धमाधम आईपीओ जारी गर्न शुरू गर्ने छन् ।
लघुवित्त समूहमध्ये नेष्ठो सम्बृद्ध लघुवित्त, जालपा सामुदायिक लघुवित्त र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तले लामो पर्खाइपछि आईपीओ जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएका हुन् । जसमा नेष्ठो सम्बृद्धले करिब ७ महिना पछि ८ करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ लाख २८ हजार ७५० कित्ता सेयर जारी गर्ने छ । संस्थाले गत असार ६ गते सो मात्राको आईपीओ जारी गर्नको लागि बोर्डको स्वीकृति मागेको थियो । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ ।
त्यस्तै, असार २० गते आईपीओको अनुमति मागेको जालपा सामुदायिक लघुवित्तले पनि ८ महिनाको पर्खाइ पछि बोर्डको स्वीकृति पाएको हो । स्वीकृति पाएसँगै संस्थाले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख २२ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । उक्त सेयर निष्काशनको काम भने प्रभु क्यापिटलले गर्ने छ ।
उता राष्ट्र उत्थान लघुवित्तले पनि करिब ७ महिना पछि नै अनुमति पाएको हो । संस्थाले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओको जारी गर्न गत असार २४ गते नै बोर्डमा पत्र पठाएको थियो ।
यता हाइड्रो कम्पनीले पनि ९९ करोड ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बजारमा ल्याउने भएका छन् । बोर्डले बलेफी हाइड्रोपावर र ग्रीन भेन्चरलाई सो मात्राको आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिएसँगै उनीहरुले अब छिट्टै नै आईपीओ निष्काशनको प्रकृया अघि बढाउने छन् ।
जसमध्ये बलेफी हाइड्रोलाई ३६ करोड ५५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिइएको छ । यससँगै कम्पनीले स्थानिय तथा सर्वसाधारणलाई एक सय अंकित दरको ३६ लाख ५५ हजार ९४० कित्ता आईपीओ सेयर निष्काशन गर्ने छ । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ ।
त्यसैगरी, गीन भेन्चरलाई पनि एक सय अंकित दरका ६२ लाख ५० हजार कित्ता अर्थात ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । यससँगै कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्फत सो मात्राको सेयर स्थानिय तथा सर्वसाधारणमा जारी गर्ने छ ।
लगातार चारदिन बढेको नेप्से १९ अंकले घट्यो
बुधबार १३ कम्पनीको सकारात्मक सर्किट लाग्दा दुई अर्बभन्दा बढीको कारोबार
रिभर फल्सको आइपीओ खुला
सारा नेपालको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एसिया
दोहोरो अंकले नेप्से परिसूचक बढ्दा चार कम्पनीको मूल्यमा सर्किट
१२ अंकले नेप्से परिसूचक बढ्दा डेढ करोडको कारोबार